वामदेवको एउटा तीर दुईटा तारोः सके पार्टी एकता नभए बलियो संगठन लिएर अध्यक्ष खाने दाउ - || वर्णन मिडिया - सूचना तथा समाचारको संवाहक ||
वामदेवको एउटा तीर दुईटा तारोः सके पार्टी एकता नभए बलियो संगठन लिएर अध्यक्ष खाने दाउ
२०७७ माघ १६, शुक्रबार ०५:२७:००
नेकपा विभाजन भएर ओली र दाहाल–नेपाल आ–आफ्नो बाटो लाग्दै एक–अर्कामाथि आगो ओकल्दै गरेका बेला नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले उनीहरूलाई फेरि एक ठाउँमा ल्याउने बताएका छन् । उनले एकता संयोजन समिति बनाएर एकता प्रक्रियाको घोषणा गरेका छन् ।
सो अभियानलाई केन्द्र हुँदै वडा तहसम्म विस्तार गरिने पनि जानकारी गराएका छन् । वामदेव गौतम विभाजित नेकपाका उपाध्यक्ष हुन् । उनी पार्टी एक छँदा तल्लो तहसम्मको एकता प्रक्रिया पूरा गर्नभन्दा संसदीय निर्वाचनमा पराजित भए पनि कसरी प्रतिनिधिसभाकै सांसद् बन्ने ? नभए राष्ट्रिय सभाको सांसद् बन्ने भनेर लागिरहे । उनले राष्ट्रिय सभाको सांसदसहित प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोल्न संविधान नै संशोधन गराउने कसरतमा लागिरहे । अन्त्यमा राष्ट्रिय सभाको सांसद् बन्न सफल भए ।
नेकपा विभाजन पछि एकता अभियानमा लागेका वामदेवले अति हठ र महत्वाकांक्षा भएका केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई फेरि एक ठाउँमा ल्याउन सफल होलान् ? अहिलेको आमचासोको विषय बन्न गएको छ ।
वामदेव गौतमले ६ सय ५१ सदस्यीय एकता संयोजन समिति बनाएर एकता अभियानलाई अघि बढाएको बताएका छन् । उनले यो अभियान पालिकाका वडा तहसम्म विस्तार गरिने बताएका छन् । गौतमले ओली र दाहाल दुवै नेताले आरोपपत्र फिर्ता लिएर आत्मालोचना गरे अहिल्यै पार्टी एकता हुने बताएका छन् । उनले सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनस्थापना हुने फैसला गरिदिए पार्टी एकता छिटै सम्भव हुने पनि जिकिर गरेका छन् । चुनावको पक्षमा फैसला गरे निर्वाचनमा दुवै पक्षबीच कार्यगत एकता गराएर अघि बढ्ने आफ्नो धारणा रहेको स्पष्ट गरेका छन् । उनले एकता अभियान तत्कालै पनि हुन सक्छ भने लामो समयसम्म पनि जानसक्ने बताएका छन् । गौतमले आफूले पार्टी नखोलेको तथा एकताका लागि मात्रै कमिटी बनाएर अगाडि बढेको बताएका छन् । एकता हुँदै भएन भने केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेर अघि बढिने बताएका छन् ।
नेकपाका उपाध्यक्ष रहेका वामदेव गौतम आमनिर्वाचनमा प्रतिनिधिसभाको सदस्यमा बाँकेबाट पराजित भए । पछि कुनै क्षेत्र खाली गराएर भए पनि निवाचनबाटै प्रतिनिधिसभामा आउन ठूलो कसरत गरे । सबै क्षेत्रबाट ठूलो विरोध भएपछि सो अभियानलाई परित्याग गरे । उनी राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्न भने सफल भए । यति मात्रै होइन राष्ट्रिय सभामा जाने भएपछि संविधान संशोधन गराएर भए पनि प्रधानमन्त्री खाने दाउमा रहेका गौतमको संविधान संशोधनको योजना सफल हुन सकेन । ओली र प्रचण्ड दुई अध्यक्षबीच झगडा भइरहँदा आफू अध्यक्ष बन्ने दाउमा रहेका गौतम कहिले प्रधानमन्त्री ओलीतिर, कहिले प्रचण्डतिर लाग्ने गरे । अहिले पार्टी विभाजन भएपछि भने उनी दुवै पक्षतिर नलागी एकता सञ्चालनको अभियानमा लागेको बताएका छन् ।
गौतमले ओली र दाहाललाई एकैतिर फर्काउने आफूसँग क्षमता भएको दाबीसमेत गरेका छन् । उनले पार्टीका दोस्रो र तेस्रो तहका नेता पार्टी विभाजनबाट दुखी रहेकाले उनीहरू आफ्नो एकता अभियानमा आउने बताएका छन् । दुवै नेताबीच एकता भएन भने दुवै सेनाबिनाका सेनापति बन्ने चेतावनी दिएका छन् । सबै नेता, कार्यकर्ता आफूतिर आएपछि कसको नेता बन्ने ? उनको धारणा छ । उनले त्यसो भने पनि उनको कमिटीमा पूर्वमाओवादीका कुनै तहका नेता आएका छैनन् । वामदेव गौतमको अभियानलाई हेर्दा ओली, दाहाललाई एक ठाउँमा ल्याएर पार्टी एकता गर्न सके एकीकृत पार्टीमा पार्टी अध्यक्षकै दाबी गर्ने भएन भने जुन शक्ति बलियो बन्छ उतैतिर आफ्नो समूह लगेर अध्यक्षकै दाबी गर्ने योजना देखिन्छ । उनको एउटा तीरले दुइृटा तारो हान्ने दाउ देखिन्छ ।
अहिले पूर्वएमालेका केही नेताबाहेक अभिकांश नेता–कार्यकर्ता जताको अवस्था बलियो हुन्छ उतै लाग्न सक्ने देखिएको छ । यसले पनि तत्काल अन्योलमा रहेका नेता–कार्यकर्तालाई एकता अभियानलाई अघि बढाएर आफूतिर तान्न सकिनेमा गौतम रहेको देखिएको छ । अधिकांशले पार्टी विभाजनलाई राम्रो नमानेकाले उनीहरूलाई आफूतिर तान्ने गतिलो माध्यम बन्नेमा उनी छन् । स्थिति त्यति सजिलो भने छैन । अहिले ओली दाहाल–नेपाल दुवै पक्ष संगठन निर्माणमा आक्रामक रूपमा लागेकाले पछि जे भए पनि एकतिर आबद्ध हुनैपर्ने बाध्यता नेता–कार्यकर्तामा छ । अर्को, धेरैको विश्वास अहिलेका शीर्ष नेता रहेसम्म पार्टी एकता पनि हुन्न र भए पनि पार्टीलाई सशक्त बनाएर लैजान कठिन छ भन्ने नेता–कार्यकर्तामा रहेको देखिएको छ । यसले पनि वामदेवको अभियानमा चुनौती थपेको छ ।
प्रधानमन्त्री –प्रधानन्यायाधीश दूरी बढ्दा नियुक्ति रोकियो